Alacritty: inokurumidza kwazvo terminal emulator yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Alacritty: inokurumidza kwazvo terminal emulator yeLinux
Kana iwe uchitsvaga dzimwe nzira kune maemulators emagetsi anouya nekumira mune yako yaunofarira GNU / Linux distro, acritty inogona kuve imwe nzira yakanaka. Iyo yemahara, yakavhurika, yekuchinjika-chikuva uye inokurumidza terminal emulator inoviga zvimwe zvakasarudzika uye zvinonakidza peculiarities. Imwe yacho ndeyekuti ichashandisa yako GPU kupa, iyo inobvumidza kumwe kugadziridza kusingawanikwe mune mamwe akawanda emulators eLinux.
Iyo Alacritty chirongwa chinotarisa pane kunatsiridza mashandiro, kurerutsa uye kufambisa basa reavo vanopedza nguva yakawanda pamberi pechiratidziri, uye nekuchinjika kune, semuenzaniso, kushandisa mamwe mapulagini senge terminal multiplexer senge tmux yatakatotaura nezvayo muLxA blog yedu. Uye haina kugutsikana nekungokurumidza, inofanira kunge ichikurumidza uye ndosaka ichi chichiita kuti iko kushandiswa kweiyo Hardware kuve kwakakosha. Ukasarudza kuiisa pane yako yaunofarira GNU / Linux distro, iwe unofanirwa kuziva kuti iwe unofanirwa gutsa kumwe kutsamira kwakapfuuraNaizvozvo, iwe unofanirwa kuisa mapakeji senge Rust, nekuti Alacritty inoshandisa mutauro uyu wechirongwa. Zvakare, iwe unogona kuwana izvo zvinodiwa gadza mamwe maraibhurari pane yako distro kana iwe usati watova nawo akaisirwa, senge cmake, freetype-devel, libfreetype6-dev, libfontconfig1-dev, uye xclip.
Paunenge wagutsikana, unogona kuisa Alacritty's pakeji yaunowana mairi iyo Github webhusaiti. Usatombo kunetseka kana maitiro ekugadzira anga asina kunyatso kujeka kwauri, kana iwe ukawana chinongedzo icho chandinokusiira iwe woenda kwachiri README, iwe uchave unokwanisa kutsvaga iyo nzira yakatsanangurwa nhanho nhanho nemirairo yese yaunofanirwa kushandisa kuiisa uye kuisiya ichigadzirira kunakirwa. Uye kana iwe ukanditendera, imwezve poindi imwe, uye yakanaka chose, asi kuti izvishandise zvinogona kunge zvisina kukwana nekuti mamwe mashandiro haasati awedzerwa ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Alacritty: inokurumidza kwazvo terminal emulator yeLinux
0 AD mutambo wakasarudzika wemutambo wakafanana neZera reMambo
Nzira yekuwedzera Flatpak rutsigiro kune yako Linux kugovera?